UKUQHUBA, UKUKHALA, UKUQALA NOKUBUYELA Inqubomgomo - ukuyothenga nge-shopping24.com - SD24
Ikhaya > UKUHLELA, UKUKHULULELA, UKUFUNDA NOKUBUKELA Inqubomgomo
Siyaziqhenya ngokunikeza amahhala amazwe wonke emhlabeni wonke ngezinto zonke! Simboza izindleko zokuthumela - nomaphi lapho ukhona!
Amaphakheji avela kubakhiqizi, izindawo zokugcina impahla, abahlinzeki noma abahambisa e-China, eHong Kong noma eShailand bazohanjiswa yi-EPacket uma kutholakala ezweni lakho ukunikeza ukulethwa okusheshayo nangaphandle kwezinsizakalo ezingcono kakhulu ezitholakalayo.
Ukuthunyelwa kwemikhiqizo evela kwezinye izindawo zendawo kuyokwenziwa ngokusebenzisa ukuthutha okujwayelekile, ngaphandle kokuthi kulandiswe ngenye indlela.
Ukwenziwa kwemikhiqizo yokufuna kuzokwenziwa futhi kuhanjiswe ngenye yezethu ezenziwe ekusebenziseni ukuphrinta kanye nabalingani bokukhiqiza. Ngoba iningi lokwenziwa kwemikhiqizo yezinto ezidingekayo kanye nezindawo zokuthutha zihlala emazwekazini amaningi kanye namazwe (US, amazwe ahlukahlukene e-EU nase-Australia). Ezimweni eziningi izindawo eziseduze nawe zizosetshenziselwa ukukhiqiza nokuthumela umkhiqizo. Uma isibonelo ungumakhelwane we-EU sizozama ukukhiqiza nokuthumela e-EU ukugwema ukuthi unenkinga namasiko noma ezinye izinkinga zokungenisa. Ngokuba i-US, i-Australia nezinye izifunda kanye nezixazululo ezilinganayo zamanani ziyatholakala futhi zizosetshenziswa uma zikhona. Ukungaxhunyiwe kungasebenza futhi kuyadingeka ngezizathu zobuchwepheshe noma amazinga okugcina impahla kanye nokutholakala.
Njengamanye ama-retai e-intanethilers, we angeke abekwe icala nganoma yiziphi izinkokhelo zenkambiso, intela yokungeniswa noma izimali zokuphatha zendawo lapho izinto zithunyelwe. Izimo zamasiko zihluka ngezwe futhi kukhona nezinguquko eziningi. Ngokuthenga imikhiqizo yethu, uyavuma ukuthi amaphakheji owodwa noma amaningi ngomyalelo owodwa angathunyelwa kuwe futhi angathola izimali zokukhokha kanye nemali yokuphatha lapho efika ezweni lakho futhi kuye ngokuthi umthetho wakho wezwe.
Ungase ufune ukubuza noma ukusesha ku-intanethi mayelana nezimo zomthetho zamazwe wakho ngaphambi kokuyala. Iningi lezimpahla lizofika ngaphandle kwezinkinga ezinjalo.
Isikhathi sokuthumela sihluka ngendawo. Lezi yizilinganiso zethu, kodwa ayikwazi ukuqinisekiswa:
Indawo Yokulinganisa Isikhathi Esilinganisiwe
Izinsuku zebhizinisi zase-United States ze-4-15
I-Canada, i-Europe 6-25 yebhizinisi izinsuku
E-Australia, eNew Zealand 6-30 Izinsuku zebhizinisi
Ephakathi NaseNingizimu Melika 15-55 Izinsuku zebhizinisi
Ezinye izindawo 15-55 Izinsuku zebhizinisi
Yebo, sizosebenzisa ukwaziswa kokulandelela uma kutholakala ku-oda yakho. Uzothola i-imeyili uma i-oda yakho ihamba ngemikhumbi equkethe imininingwane yakho yokulandelela.
Kwezinye izinkampani zokuthumela, kuthatha izinsuku ezingu-1-5 ukucubungula i-oda yakho futhi kungathatha izinsuku zebhizinisi ze-2-5 ukuze ulwazi lokulandelela lubuyekezwe ohlelweni. Uma ngabe i-oda lakho libekwe ngaphezulu kwezinsuku zebhizinisi ze-6 ezedlule futhi kusenalo ulwazi olusenombolo yakho yokulandelela, sicela uxhumane nathi.
Ngenxa yezizathu zokungena ngemvume, izinto zokuthengwa okufanayo ngezinye izikhathi zizothunyelwa ngamaphakheji ahlukene.
Uma unemiinye imibuzo, sicela uxhumane nathi futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukukusiza.
I-REFUND iphinde ibuyele INqubomgomo
Kungakhathaliseki ukuthi kungani isicelo sokubuyisela imali noma sokubuyisela umkhiqizo kungenzeka, siyohlale silwela isinqumo esihle!
Wonke ama-oda angakhanselwa aze athunyelwe. Uma i-oda yakho ikhokhwe futhi udinga ukwenza ushintsho noma ukukhansela umyalelo, kufanele uxhumane nathi ngokushesha. Uma inqubo yokuthutha nokuthunyelwa isiqalile, ngeke isakwazi ukukhanselwa.
Uthola ukubuyiselwa imali uma:
- Into oyithethile ayizange ifinyelele esikhathini esithembisiwe - sinokudilizwa okuqinisekisiwe kwezinsuku ezingu-60, kanti imikhiqizo eminingi ifika kakhulu kakhulu.
- Into oyitholile eyayiqinisekiswa ukuthi iyinqobo, kodwa yayiyiqiniso
Uma nganoma yisiphi isizathu ungafuni umkhiqizo owutholile ungase ubuze ukubuyiselwa kwemali kodwa kufanele ubuyisele into futhi into ayifanele ingasetshenzisiwe futhi emaphaketheni wangempela. Ngaphandle kwalokho, ngenxa yezimo zomnotho (ikakhulukazi emikhiqizweni ephansi) futhi ngaphansi kwesinqumo sethu ungase ufune imvume yokubhubhisa umkhiqizo futhi usithumelele ubufakazi-isithombe - ngalolu khetho sicela uxhumane nathi ngaphambili. Sizokwazisa ngekheli lokubuyisela le nto.
Ukubuyiselwa kwemali nakho kungenzeka uma into engalungile itholwe ngokwembala, ubukhulu, noma imodeli (ubufakazi buyadingeka [foto]).
Ukubuyiselwa kwemali nakho kungenzeka uma tinto efikile izinga elibi kakhulu (ubufakazi buyadingeka [foto]).
Udinga ukuxhumana nesevisi yakho yokulethwa kweposi uma:
- Iphakethe selifikile esimweni esonakalisiwe
- I-oda lalahleka
Sicela uqaphele ukuthi izilinganiso zesayizi zinikezwa zingakhathazeka kancane, njengoba izilinganiso zivame ukuthathwa ngesandla.
Imibala kumafotos omkhiqizo ingase ihluke kancane njengemiphumela yokukhanyisa, inkinga yekhamela noma inkinga yokubonisa isikrini sekhompyutheni.
Asikwazi ukwamukela ukubuya kwimikhiqizo eyenziwe ngokufunwa kwakho. Ukwenziwa kwemikhiqizo yokufunwa kubonakala njengencazelo emkhiqizo.
Imbuyiselo ayinakwenziwa uma:
- I-oda lakho alizange lifike ngenxa yezici ezingaphansi kokulawula kwakho (ie ukunikeza ikheli elingalungile lokuthumela, kude nekhaya isikhathi eside futhi / noma babuyiselwe yihhovisi lakho lokuposa njengoba lingenakuguqulwa)
- I-oda lakho alizange lifike ngenxa yezimo ezihlukile ngaphandle kokulawulwa kwethu (okungukuthi kungasuswa amasiko, ukubambezeleka yinhlekelele yemvelo).
Ezinye izimo ezingavamile ngaphandle kokulawula kwethu.
Ungathumela izicelo zokubuyiselwa imali ezinsukwini ezingu-15 ngemuva kwesikhathi esiqinisekisiwe sokudiliva (izinsuku ezingu-60). Ungakwenza ngokuthumela umlayezo ekhasini lethu Lokuxhumana nathi.
Sicela uqaphele ukuthi tinkokhelo yokukhokha kanye nenkokhelo iphethwe yinkampani MLVEDA futhi uzophinde uqondiswe emakhasini abo kule nqubo. I-Checkout nokukhokha kwenziwa ngezimali zakho ezikhethiwe.